२०७७ असोज ३० शुक्रबार ०५:११:००
निर्देशक डा. सागर राजभण्डारी भन्छन्– कोरोना संक्रमित धेरै बिरामीलाई आइसियू र भेन्टिलेटरभन्दा पनि अक्सिजन अतिआवश्यक रहेकाले सबै बेडमा जडान गरेका हौँ
कोरोना भाइरस संक्रमितको ज्यान जोगाउन सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालले सबै शय्यामा अक्सिजन जडान गरेको छ । कोरोना संक्रमितलाई आइसियू र भेन्टिलेटरभन्दा अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने भएकाले सबै शय्यामा शुक्रराज अस्पतालले अक्सिजन जडान गरेको हो ।
कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा चिकित्सकले अस्पतालमा धेरैभन्दा धेरै अक्सिजनको आवश्यकता महसुस गरेको बताएका छन् । सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका कोभिड चिकित्सक डा. अनुप बाँस्तोला आइसियू र भेन्टिलेटरभन्दा पनि अब अक्सिजन अपरिहार्य भएको बताउँछन् । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर शुक्रराज अस्पतालले सबै शय्यामा अक्सिजन जडान गरेको उनको भनाइ छ ।
देशभरका एक सय २५ अस्पतालमध्ये शुक्रराज अस्पतालले आवश्यक पूर्वाधारको व्यापक विस्तार गरेको छ । अहिले अस्पतालमा २५ आइसियू र आठवटा भेन्टिलेटर छन् । ५९ शय्याको अस्पतालले पछिल्लो समय आइसियू र भेन्टिलेटरभन्दा अक्सिजन विस्तारमा जोड दिएको छ । जसले गर्दा धेरै बिरामीको ज्यान जोगाउन सकिएको अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले बताए । अहिलेसम्म शुक्रराज अस्पतालमा तीनजना मात्रै संक्रमितको ज्यान गएको छ ।
अहिले फेरि अस्पतालले सबै शय्यामा अक्सिजन जडान गरेको छ । कोरोना संक्रमित धेरै बिरामीलाई आइसियू र भेन्टिलेटरभन्दा पनि अक्सिजन अतिआवश्यक रहेको बताउँदै निर्देशक डा. राजभण्डारीले भने, ‘हामीले गम्भीर अवस्था आउने देखेर सुरुमै लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेका थियौँ । अहिले उपलब्ध भएका सबै बेडमा अक्सिजन जडान गरेका छौैँ ।’
शुक्रराज अस्पतालले ६८ लाख खर्च गरेर वैशाख अन्तिमतिर ‘लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट’ जडान गरेको थियो । त्यसअघि सिलिन्डर प्रयोग हुँदै आएको थियो । ‘विगतमा अक्सिजन प्लान्टले तीन महिना पुगेको थियो,’ अस्पतालका प्रशासन प्रमुख रूपनारायण खतिवडाले भने, ‘अहिले केस बढ्दै गएकाले एक महिनाभन्दा पुगेको छैन ।’ आकस्मिक कक्षमा रहेका १० शय्यामा पनि केही दिनभित्र अक्सिजन जडान गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । चिकित्सकहरूले श्वासप्रश्वासमा समस्या भएका कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन मात्रै दिएको खण्डमा पनि धेरैको जीवन बचाउन सक्ने बताएका छन् ।
गत २ चैतमा सरकारले ६ अस्पतालमा एक सय २० आइसियू थप्न ६२ करोड ५० लाख दिएको थियो । जसमा शुक्रराज अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइसियू थप्न बजेट दिइएको थियो । तर, टेकु अस्पतालबाहेक अन्य कुनै पनि अस्पतालले नयाँ थप गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अरू पाँचवटै अस्पतालको रकम फ्रिज भएको छ ।
देशभर १६ हजार पाँच सय ९८ नमुना परीक्षण गर्दा तीन हजार सात सय ४९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । योसँगै संक्रमितको संख्या एक लाख २१ हजार सात सय ४५ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाबाट एकैदिन १९ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै मृत्यु हुनेको संख्या ६ सय ९४ पुगेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी कुन जिल्लाका कति संक्रमित भए
- मोरङ १५४
- सुनसरी ५७
- झापा २०
- धनकुटा ४
- उदयपुर ४
- सप्तरी १९
- सिराहा २५
- धनुषा ६२
- महोत्तरी २५
- सर्लाही २२
- रौतहट १६
- बारा ४८
- पर्सा १५३
- काठमाडौं १३४८
- ललितपुर ४२८
- भक्तपुर २११
- चितवन ३६३
- मकवानपुर १६
- काभ्रे १४२
- धादिङ १९
- नुवाकोट ३
- रामेछाप ४
- सिन्धुपाल्चोक २
- सिन्धुली ११
- दोलखा ३
- रसुवा १
- मनाङ १
- पर्वत १२
- गोरखा १
- लमजुङ ८
- तनहुँ १२
- कास्की १४
- बाग्लुङ १२
- स्याङ्जा ४
- नवलपरासी पूर्व १२
- कपिलवस्तु २५
- दाङ ३९
- पाल्पा १८
- बाँके १४३
- गुल्मी ९
- रुपन्देही ६२
- प्युठान १५
- बर्दिया १४
- नवलपरासी पश्चिम १८
- रोल्पा २
- दैलेख १४
- जाजरकोट ८
- जुम्ला ६६
- कालिकोट २
- सल्यान ४
- सुर्खेत १९३
- अछाम ४२
- बझाङ १
- बाजुरा ७
- डडेल्धुरा २
- दार्चुला १
- डोटी १
- कैलाली २६
- कञ्चनपुर ६
कोरोना कहर : टेकु अस्पतालमा पिसिआर परीक्षण गराउनेको भिड (फोटोफिचर)
कोरोना त्रास : टेकु अस्पतालमा भीड (फोटोफिचर)
टेकु अस्पतालले चार दिनमा बनायो २० शय्याको आइसियू
नेपालमा कोरोना : चार सय ५० नमुना परीक्षण, पाँचजना टेकु अस्पतालमा